Apple Inobvisa Apple Tarisa Hutano Dambudziko nekuda kweCoronavirus | Ndinobva mac
Apple inodzima Apple Tarisa hutano dambudziko nekuda kwecoronavirus
Pasina nguva refu takakuudza kuti Apple yakaronga kuvhura Kukadzi hutano hweApple Watch kunyangwe chete kune vashandi. Zvakadaro kambani yeAmerica yafunga kudzima dambudziko, zvirinani kumisa iyo kwechinguvana, nekuda kwekonaona.
Zvinotaridza kuti hosha yakatanga muWuhan uye kuti inomiririra dambudziko rehutano hwepasi rose kana iri kubata Apple neimwe nzira. Zvitoro zveApple zvakavhara mazuva mashoma, kunyangwe zvichiratidzika kuti zvichavhurwa munguva pfupi iri kutevera, uye ikozvino kudzimwa kwedambudziko rekuvhara zvindori zveApple Watch kunowedzerwa.
Dambudziko reApple Watch revashandi chete rakaremara kwechinguva nedambudziko rehutano
Nekuda kwedambudziko rehutano rinokonzerwa necoronavirus iyo yakatanga munyika yeAsia, Apple yakafunga kuvhara zvitoro zvese nenzvimbo dzemakambani kudzivirira kupararira kwechirwere. Atora iyo sarudzo imwecheteyo padambudziko rekuvhara mhete nhatu dzeApple Watch.
Mumwedzi weMoyo, Kukadzi, Apple yaida kuti vashandi vayo vange vari mune yepamusoro-soro chimiro ne chinetso chinosanganisira kuvhara mhete nhatu dzeApple Watch zuva rega rega mumwedzi iwoyo. Neiyi nzira aizowana mibairo yakati wandei.
Mune meseji yakatumirwa kune vashandi veApple unogona kuverenga kuti: "Iyo Vhara Yako Rings Dambudziko ndiyo imwe yeiyo isingawanzo mikana yekuunza pamwechete nhengo dzechikwata uye vatinoshanda navo kubva kutenderera pasirese nechinangwa chakafanana chekuvhara mhete dzedu, kuwana mamwe mapoinzi, uye kufara. Namahofisi edu akati wandei nezvitoro zvakavharwa muChina panguva uye se mamwe enhengo dzechikwata chedu haakwanise kutora chikamu, tafunga kumbomisa iyo Yakavhara Yako Rings Dambudziko 2020. NUr dambudziko richabviswa kubva kuChinetso app.
Tichagadzirisa munhu wese nekukurumidza kana tangova nezuva idzva mariri tese tinogona kutarisa pamwe chete pakuvhara mhete dzedu! "
Saka zvataona zvatakaona, ngatitarisirei kuti hatifanire kumirira kwenguva yakareba kuti zvinhu zvese zvidzokere kuchimiro. Chingave chiratidzo chakanaka, kwete chete nekuda kwedambudziko raFebruary, asiwo nekuti hutano hwekukurumidzira huchave hushoma kana kupotsa kusipo. Tiri kutarisira kwairi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inodzima Apple Tarisa hutano dambudziko nekuda kwecoronavirus
Twitter inovandudza kuenderana kwayo neMac Touch Bar
Apple veChinese vanotengesa kuti vatangezve kugadzirwa muna Kukadzi 10